Madaxtoyada : Cadalad Daraddii Qarniga Q:1aad W/Q Kamal Sh Ismail |
Madaxtoyada : Cadalad Daraddii Qarniga Q:1aad W/Q Kamal Sh Ismail
Laakin se waxaa sharaf iyo milgo iga mudan madaxwaynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamud Silanyo iyo marwadiisa Amina Sh Maxamud Jirde
Marka hore waxaan u mahad naqayaa allaha ina siiyay amniga iyo iimaanka, marka labaad waxaa sharaf iyo cisi leh diinteena islaamka ah ee aynu haysano ee aynu ku dhalanay ina bartayna wixii xaqa iyo wixii baadil ah.
Busho waynta Somaliland ee sharafta leh waxaan la wadaagi doona dhacdooyin iyo xaqiiqooyin ku salaysan runta kuwaas oo ka dhex dhacay qasriga looga arimiyo Somaliland.
Taxanahan aan bilaabay ayaan ku soo bandhigi doonaa fal-danbiyeedyo iyo tacadiyo uu ku kacay masuul sita magaca dawlada oo ah agaasimaha guud ee madaxtoyadda Somaliland khadra x gaydh.
Laakin se waxaa sharaf iyo milgo iga mudan madaxwaynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamud Silanyo iyo marwadiisa Amina Sh Maxamud Jirde oo ah hormoodka Somaliland.
madaxwaynaha iyo marwadiisa ayaa wixii wanaag ah ee dalkan iyo shacabkiisu helo iyagaa magac iyo maamuus ku leh dhanka kale wixii xadgudubyo iyo tacadiyo ah ee iyana dalka ka dhaca iyaguu magacooda bar madaw ku noqonayaa haddii ayna talaabo ka qaadin oo ayna indhahooda ka laaban wixii jira.
Madaxtoyadda oo ah rugta ay kasoo fulaan arimaha iyo talooyinka lagu taabo galinayo qaran curdinka ah ee aan wali dunidu ka helin aqoonsi oo aynu dhamaanteenba rabno in aynu ka mid noqono shucuubta caalamka oo la ina aqoonsado ayaa haddana waxaa dhexdeeda jooga dad iyo ash-khaas cunsiriyad ka buuxdo oo kala dilaya beelaha walalaha ah ee Somaliland wada daga.
jalaafooyinka iyo hagardoominka uu ku kaco masuul dawladeed oo waliba uu si badheedh ah oo aan gabasho lahayn uu u sameeyo ayaa dalkeena kusoo badanysa tusaale kooban muwadin somalilander ah oo shaqadii uu qaranka uu u hayay looga hor istaago “Beel ama Qabiilka” uu kasoo jeedo ayaan ahayn mid curdin ah waana wax mar walba dhagaheenu maqlaan in wasiir ama agaasime uu maxaafsado mudada yare e uu xilka hayo in uu beeshiisa shaqaalaysiisto mid qabiil kale ahna uu uga hor istaago shaqadii uu qaban lahaa waxayna taasi jabinaysaa dastuurka Somaliland oo odhanaya in muwadinka somalilanderka ahi uu xaq u leeyahay in uu dalka ka shaqaysto.
Intanan u gudo galin taxanahan oo aan si qoto dheer u qoray oo aan kusoo bandhigi doono cadalad daro aan ka tirsanayo agaasimaha guud ee madaxtoyada Somaliland.
ayaan waxaan su’aal warbaahinta u marinayaa madaxweynaha qaranka Somaliland iyo marwadiisa su’aashaas oo ah.
1. Mudane madaxweyne ma raali ayaad ka tihiin adiga iyo qoyskaaga in qasriga aad ku nooshihiin dhexdiisa ay ka dhacdo cadalad daro ah in muwadin shaqadiisa gudanayo looga hor istaago cunsiriyad qabiil oo waliba uu ku kacay masuul qaranka xil u haya?
Waxaan akhristayaasha sharafta leh aan u balan qaadayaa cutubyo iyo qaybo mihiim ah oo taxanahan ah iyo qaabkii ay u dhacday cadalada la waayay.
Waxaynu ka wada dharagsan nahay haddii cadalad la waayo in ayna nolasha dhamaanteedba ayna suurto galayn oo cid walba ay saamayn doonto,
Kamaal Ismail Adem <shihaab25@hotmail.com
Gabileynews marnaba masuul kama aha Aragtida dadka kale. Qoraaga ayaa xumaanteeda, xushmadeeda iyo xilkeda sida. waxa kaliya oo Gabiley.net dhiirigalinaysaa, isdhaafsiga aragtida, canaanta gacaliyo talo wadaagga